एमसीसी रोक्न भीम रावलले गुहारे नेपाली सेना, अब के हुन्छ ? — Imandarmedia.com
एमसीसी रोक्न भीम रावलले गुहारे नेपाली सेना, अब के हुन्छ ?
काठमाडौ। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी पास हुने नै भएपछि उनले नयाँ तरिकाको विरोध जनाउन थालेका छन्। उनले अनेकौ चलखेल गरेर एमसीसी पास गर्न खोजिएको बताएका छन्।
डाक्टर रावलले कुनै पनि हालतमा एससीसी पास गर्न नहुने अडान लिएका छन्। योहो टेलिभिजनको कार्यक्रम सत्य संवादमा पत्रकार जीवराम भण्डारीसँग कुराकानी गर्दै रावलले यस्तो बताएका हुन्।
अहिले नेपालका केही नेताहरु विदेशी शक्तिको शरणमा परेको उनले आरोप लगाए। सँधै नेपालको प्रधानमन्त्री भइरहन्छु भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्यो नेपालका नेताहरुले, उनले भने।
पत्रकार भण्डारीले कार्यक्रममा एउटा ठूलै व्यक्तिले आफूलाई भनेको भनेर अमेरिकाबाट एमसीसी पास गराउनका लागि छुट्टै छ अर्ब आएको खुलासा गरे। उनले ती व्यक्तिको नाम भने सार्वजनिक गर्न चाहेनन्।
एमसीसी जबर्जस्ती पास गर्न खोजिए तपाईले नागरिक समूहलाई के आव्हान गर्नुहुन्छ र भने पत्रकारको प्रश्नमा उनले कर्मचारीहरुले काम गरिरहदा नेपालको कानुन सम्मत छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्ने बताए।
खासगरी सुरक्षाकर्मीहरु, नेपाली सेनालाई मेरो अनुरोध के छ भने छ उहाँहरु त यो देशको रक्षक हो। यदि देशमा कुनै सुरक्षा र स्वाधीनतामा आँच आउने सम्झौता भइरहेको छ भने उहाँहरुले त डट्नुपर्यो, हेरिरहनुभएन’ नेता रावलले भने।
रावलले एमसीसी पास गर्न खोजिए व्यापक आन्दोलन गर्न र आवाज उठाउन जनतालाई पनि आह्वान गरेका छन्। यस्तै, नेपालमा एमसीसी ल्याउँनु पर्छ भनेर पहिलो पटक अमेरिकालाई पत्राचार गर्ने मान्छे बावुराम भट्टराई भएको।
भन्दै रावलले प्रमाणनै पेस गरेका छन्। काठमाडौंमा आयोजित अमेरिकी लोकतन्त्रको यथार्थ र एमसीसी’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै रावलले बावुरामलाई दलालकै संज्ञा दिएका छन्।
अहिले पनि बावुराम भट्टराई एमसीसी पास हुन पर्छ भनेर हिँडेको भन्दै यस्ता मान्छेलाई नोटिसमा राख्न पनि रावलले भनेका छन्। एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौताको भारी बोकेर हिड्ने बावुराम देश परिवर्तनका लागी भएको जनयुद्धको नेतृत्वमा कसरी पुग्यो भनेर पनि प्रश्न पनि गरेका छन्।
एमसीसी कसरी नेपालको हित विपरित छ भनेर आजको कार्यक्रममा रावलले पावरप्वाइन्ट प्रिजेन्टेसननै गरेका थिए। राववलले एक एक बुँदा बुँदामा चिरफार गरेका थिए।
कुनै पनि हालतमा एमसीसी पारित गर्न नदिने भन्दै उनले अझै पनि एमसीसी राष्ट्रघाती होइन भन्नेलाई डाक्टरकोमा गएर आँखा जाँच गरेर राम्रो चस्मा लगाएर पढ्न पनि उनले चुनौती दिएका छन्।
पूर्वउपप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेता रावलले एमसीसी संशोधन बिना नै संसद्‌बाट पारित गरिए त्यसले मुलुकलाई शक्ति राष्ट्रहरुको द्वन्द्व र संघर्षमा परिणत गर्ने चेतावनी समेत दिए। नेता रावलले कुनै पनि देशभक्त नेपालीले त्यो सम्झौता मान्न नसक्ने अडान पनि दोहोर्‍याए।
उनले एमसीसी सम्झौता संशोधन गरेर भने अघि बढाउन आफू पनि सहमत रहेको बताए।नेपालकै कतिपय नेताहरुले सो सम्झौता संशोधन बिना नै अघि बढाउनुपर्छ भनेको देखेर आफूलाई आश्चर्य लागेको नेता रावलको भनाइ छ।
जसपा डा.बाबुराम भट्टराईको कब्जामा, उपेन्द्र यादव तनावमा: जनता समाजवादी पार्टी, नेपालमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अल्पमतमा परेका छन्। पछिल्लो समय एमसीसीलाई लिएर संघीय परिषद् अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईसँग यादवको टकराव बढेको थियो।
यादव एमसीसीको विपक्षमा छन्। तर, भट्टराई भने एमसीसी तत्काल संसद्बाट पारित गराउनुपर्ने पक्षमा उभिँदै आएका छन्। यही बीचमा जसपाका नेताहरुले तत्काल कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाउन माग गरेका छन्।
तर, अध्यक्ष यादवले भने बैठक बोलाउन आनाकानी गरिरहेका छन्। जसपाका एक कार्यकारिणी सदस्यकाअनुसार यादव अहिले संसदीय दल र कार्यकारिणी समिति दुवैमा अल्पमतमा छन्।
यो बीचमा जसपामा अशोक राईलाई अर्को अध्यक्ष बनाउनको लागि पनि यादवमाथि दबाब परेको थियो। अहिले बाबुरामको पक्षमा अत्यधिक बहुमत सांसदहरु खुलेका छन्। राजकिशोर यादव, महिन्द्रराय यादव, प्रदीप यादवलगायतका सांसदहरु भट्टराईको पक्षमा खुलेका छन्।
पार्टीको सबै कमिटीमा यादव अल्पमतमा परेको ती नेताको दाबी छ। यस्तो अवस्थामा अब पार्टीमा यादवले भनेको कुरा लागु हुने सम्भावना छैन्।पछिल्लो समय यादवसँग भट्टराईको टकराव बढेको छ।
यादवले नेकपा माओवादी केन्द्र का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग अघोषित साँठगाँठ गरेको भट्टराईको गुनासो छ। उनले आफूनिकट नेताहरुसँग भन्ने पनि गरेका छन्।
म प्रचण्डले बोकेको विचार गलत छ भनेर विद्रोह गरेर आएको नेता हुँ, अनि हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्रजी प्रचण्डकै एजेण्डामा लत्रिन थालेपछि कसरी पार्टी अघि बढ्छ।
एमसीसीको विषयमा यादवले पनि प्रचण्डले जस्तै दोहोरो नीति अवलम्बन गरेको नेताहरुको गुनासो छ। तर, भट्टराईले भने पार्टी एमसीसीको पक्षमा उभिने बताउँदै आएका छन्।
उनले एमसीसी नेपालको हितमा भएको भन्दै कुनैपनि हालतमा फिर्ता पठाउन नहुने धारणा राख्दै आएका छन्। सरकारले विरोध र विवादका बावजुद पनि फागुन ८ गते एमसीसी प्रतिनिधिसभामा टेबुल गराएको छ।
सरकारको तर्फबाट सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले उक्त प्रस्ताव पेश गरेका हुन्। अब प्रतिनिधिसभाको बैठक फागुन १२ गते दिउँसो १ बजे बस्ने तय भएको छ। अबको बैठकमा एमसीसीबारे छलफल हुने बताईएको छ।
संसद् बैठक बस्नुअघि नै जसपाको संसदीय दलका बैठक राखेर एमसीसीको पक्षमा उभिने भनेर बहुमतले निर्णय गराउने बाबुराम पक्षको तयारी छ। जसपामा एमसीसीलाई लिएर बहुमत सांसदहरु पक्षमा उभिएका छन्। उनीहरुले एमसीसीको विषयमा दलले ह्वीप जारी गर्न नहुने पनि धारणा राख्दै आएका छन्।